Ọmụmụ ihe omimi Russia gosiri na GMOs ga-egbochi ụmụ mmadụ ime ihe ọ bụla site na ọgbọ atọ - AFRIKHEPRI
Ọmụmụ ihe Russian na-egosi na GMO ga-emebi ụmụ mmadụ mgbe ọgbọ 3 gasịrị
Nmalite na mmata ime mmụọ - René Guénon (PDF)
sunday, nwere ike 24, 2020
GMO ga-eme ka ụmụ mmadụ ghara ịmịnye ụmụ mmadụ mgbe ọgbọ 3 gasịrị
Onke echeburu na ụnwụ nri bụ otu ihe kpatara mbibi a, ọmụmụ emere na nso nso a na-aga n'akụkụ a. Ọmụmụ ihe nke, ọ bụrụ na -aghọtaghị ya, nwere ike inwe nnukwu mmetụta na mkpebi ndị aga-eme n’ọdịnihu.
N'afọ 2009, GMOs ji hectare nde 3 kpuchie ala ọrụ ugbo n'ihe dịka nde IS134A, nke, kwa afọ, na-akọ na ịkọ ahịhịa nke ahịhịa ụwa. Faịlụ GMO nri nwere ike ịba ụba n'oge na-adịghị anya mgbe a na-aga ịgbakwunye mpempe ọhụrụ site na Russia.
Nke a na-ewe ụdị ọmụmụ ihe, ihe ndị kachasị pụta ìhè bụ ndị e gosipụtara na redio dị na Russia dịka akụkụ nke oghere na mba a nke Nchedo Nchebe megide Ọdịmma Ewu. Ọ bụ ọbụna Jeffrey Smith, bụ onye guzobere Ụlọ Ọrụ Maka Ọrụ Ndị Na-ahụ Maka Ọrụ na United States na onye dere edemede na ụwa nke GMO gụnyere akwụkwọ ya bụ Seeds of Deception (n'ụzọ nkịtị "mkpụrụ nke aghụghọ") bipụtara na 2003. Ndi otu National Association for Genetic Safety na Institute of Ecology and Evolution, nke a na-eduzi na ọmụmụ ihe a nke Russia bu afọ abuo, ndi mmadu bu ndi Campbell hamsters, umu nke nwere ogo mmeputara elu. Dịka ọmụmaatụ, Dr Alexey Surov na ndị otu ya nyere ụmụ anụmanụ ntà aka ruo afọ abụọ, ma e wezụga na ụfọdụ n'ime ha na-eri nri nke GM (na-ebubata mgbe nile na Europe). ) na-eguzogide ọgwụ na ahịhịa.
Na mbu, e guzobere ìgwè anọ nke ụzọ abụọ (ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị): nke mbụ na-eri nri na-enweghị soy, nke abụọ, soro nri nke gụnyere soy. Ejiri GM soy mee nke atọ na mgbakwunye na n'ikpeazụ otu nke anọ nwere trays nri ebe nke soy transgenic soy dị elu karịa nke nke atọ.
Na njedebe nke oge mbụ a, ìgwè anọ niile nwere obere 140 kpamkpam. Ọmụmụ ihe ahụ gara n'ihu na mpaghara nke abụọ site na ịhọrọ ụdị abụọ site na nke ọ bụla n'ime ìgwè ndị a. Na, n'echiche nke akọwa, ọgbọ ọhụrụ nke ọgbọ nke abụọ, ha onwe ha kwa, ha dị ntakịrị, na-eke n'ezie ọgbọ nke atọ na nke ikpeazụ nke ọka ezi. N'ihi ya, e nwere ndị ikpeazụ 52 ịmụ nwa n'etiti atọ na ọgbọ ụdị na ahụ na-erepịaghị soy na niile, 78 n'etiti ndị na-iwesa ot soybeans.
Ma otu nke atọ, onye na-enye GM soy, nwere naanị 40 obere, nke 25% nwụrụ. Na, ka njọ, na otu na-eri ihe ndị kasị genetically gbanwetụrụ soya, otu nne jisiri mụọ ma ọ bụ 16 obere na ngụkọta, 20% mechara nwụọ.
N'ihi ya, n'ọgbọ nke atọ, a na-ejikwa mkpụrụ akụ, maka mkpa ọmụmụ,, na nchịkọta ihe ha, akụkụ dị ukwuu nke GMO soybeans, enweghịzi ike ịmụgharị.
Ma, e nwere nnukwu ihe ijuanya: ụfọdụ n'ime ihe ndị a sitere na ọgbọ nke atọ juputara na ntutu ... n'ime ọnụ, ihe atụ nke oké egwu.
Lee foto ndị Jeffrey Smith bipụtara na post ya. Dị ka Jeffrey Smith si kwuo, nchọpụta nke Dr. Surov na ndị otu ya nwere ike "wepụ" otu ụlọ ọrụ ọtụtụ ijeri dollar. The ikpe bụ na-eso, ma, na agbanyeghị, ebe ọ bụ na iwebata na 1996 na gburugburu ebe obibi na nri yinye nke transgenic ubi (toro si osisi nke na-kwukwara otu ma ọ bụ karịa mba ọzọ mkpụrụ ndụ ihe nketa iji nye osisi a kpọmkwem onwunwe), ihe ize ndụ metụtara ya ka na-adịtụghị ama n'ihi ole na ole kwuru, enweghị zuru ezu ogologo na onwe ha ọmụmụ, kamakwa n'ihi na nkpuru jụrụ na-ebipụta ha ọmụmụ ( ma ọ bụrụ na agbanyeghị iwu iwu) maka ihe kpatara usoro ahia na ụlọ ahịa.
N'agbanyeghi dika o siri di ike, iwu akpachara anya na mpaghara a yiri ihe ezighi ezi, ebe amamịghe nke sayensi nke ghagide kwesiri ikwenye ya ozugbo banyere nyocha. Ọzọkwa, anyị nwere ike iche na enweghi oke ịkpachapụ anya na enweghị nghọta doro anya ga-emebi nsogbu ọha na eze n'otu oge ahụ GMOs (usoro nke abụọ) nke enweghị ike itule na ọnọdụ ka mma ebe ọ bụ na ndị dị ugbu a dị n'ahịa bụ naanị obere akụkụ. N'ihi na nsogbu, n'ụzọ bụ isi bụ na anyị niile, ndị na - eri nri, nọ na njedebe nke ụdị nri a: emesia n'ikpeazụ na akụkọ ihe mere eme, olee ndị bụ ndị ọkụ Guinea n'ezie?
Ihe nzuzo GMO
9,10€ dị na ngwaahịa
3 ọhụrụ site na 9,10 €
Ejiri 14 € 2,25 mee ihe
dị ka Mee 24, 2020 12:12
Part Number A-164-694
Ụbọchị mwepụta 2007-04-05T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2007-04-05T00:00:01Z
Mkpụrụ osisi a rụrụ arụ na-egbochi uto nke mkpụrụ ndụ kansa na ọrịa shuga
Lelee Lovehụnanya & Egwuregwu (2011)
World War Z [Bubata]
Nkwa: My Autobiography by Didier Drogba (2016-06-30)